स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । शुक्रवार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पर्साका ३ जना, सिराहाका १ जना र सर्लाहीका १ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन् ।
पछिल्लो समयमा संक्रमणको दर बढेसँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको हो । बिहीवार पनि ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यससँगै हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण ७० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा. गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ९ सय २६ पीसीआर परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । परीक्षणका क्रममा ४ सय ६४ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्याकामा मात्र १ सय ६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यो हालसम्म एकैपटक देखिएको संख्या भन्दा बढी हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा ९२, ललितपुरमा १० र भक्तपुरमा चार जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो ।
देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ हजार ३ सय ३० रहेको छ । देशभर हालसम्म २२ हजार २ सय १४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ भने १५ हजार ८ सय १४ जना निको भएर डिस्चार्ज भैसकेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले हालसम्म ६ हजार ३३० जना आइसोलेशनमा रहेको जानकारी दिए ।
सुरक्षा निकाय,सरकारी कार्यालय तथा न्यायालयमा बढी संक्रमित
डा. गौतमले पछिल्लो चरणमा सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय, न्यायालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र प्रदेशमा मन्त्री समेतमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको बताए । उनका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये बहुसङ्ख्यक ७५ प्रतिशतभन्दा बढी २१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका छन् भने ६० भन्दामाथिका अतिन्यून २ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।
साथै सङ्क्रमितमध्ये चार प्रतिशत १० वर्षमुनिका रहेका छन् । हाल परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाई लक्षण देखिएका, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति, गम्भीर स्वासप्रस्वासमा समस्या भएका व्यक्ति, अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने व्यक्तिको परीक्षण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्लागत रुपमा ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित चार जिल्ला पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ रहेका छन् । सङ्क्रमित शून्य रहेका छ जिल्ला खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र रुकुमपश्चिम रहेका छन् ।
सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयको अपील
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा सङ्क्रमणको दर बढेकाले अस्पतालमा श्यया उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुनसक्ने भएकाले सबैलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले कोरोनाको औषधि पत्ता नलागी सकेको भन्दै सबै अस्पतालले चिकित्सकलाई सिफ्टअनुसार मिलाएर काम गराउन आग्रह गरे । मन्त्रालयले सरकारी, सामुदायिक तथा अफिसमा बैठक, गोष्ठी, सेमिनारलगायत अन्य जमघट तत्काल बन्द गर्न र गर्नै परेमा भर्चुअल बैठक गर्न आग्रह गरेको छ ।
औषधि, अक्सिजन र भेन्टिलेटरले सहयोग मात्र गर्ने हो भन्दै प्रवक्ता गौतमले रोगको उपचार नगर्ने भएकाले उचित उपाय भनेको नै रोग लाग्न नदिनु यो यसका लागि बेलैमा सचेत हुन सङ्क्रमण बढ्दै गएमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले धान्न नसक्ने र अकालमा मृत्यु हुनसक्ने अवस्था आउने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरे ।
उपत्यका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि आइतवारदेखि लागू हुने गरी सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको भक्तपुर जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुमकला पाण्डेले लोकान्तरलाई बताइन् । अन्य कार्यालयहरूको हकमा भने सम्बन्धित कार्यालयले नै निर्णय गर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।